Ihe Na-efu Na Na Na Barcelona | Otu Di na Nwunye
A maara Barcelona maka nkà ya na ịrụ ụlọ ya, ma eleghị anya ọ bụghị n'ihi ihe dị ala ọ ga-eme. Na ọrụ a ma ama nke Antoni Gaudi agụnyere na ebube ụlọ ndị a, mana enwere obodo karịa! Barcelona bụ ebe obibi, jupụtara na ọdịbendị, ebe nkiri, akụkọ ihe mere eme na ihe omume. Ọ bụ obodo dị n'oké osimiri na-agba n'oké osimiri nke na-enye ihe niile ị nwere ike ịchọrọ na njem njem, emesịa ụfọdụ.
Ndị njem na ndị obodo ahụ La Rambla, ndị na-ahụ maka ihe owuwu ụlọ mara mma na Katidral, ndị hụrụ nka n'anya na-agbago na ebe a na-edebe ihe ngosi nke Picasso, na ọdọ mmiri ndị dị n'akụkụ osimiri Mediterenian. Na ihe na - eme ka Barcelona bụrụ ihe na - adọrọ adọrọ ma na - akpali akpali bụ ịchọta ụzọ iji nyochaa ebe a na - adọrọ mmasị n'efu. Ndị a bụ ụfọdụ nnukwu ebe nkiri dị na obodo ahụ nke ga - eme ka ọdịmma gị na obere akpa gị nwee obi ụtọ.
Picasso biri ụfọdụ n'ime afọ ndị kachasị mkpa na Barcelona - ndị ọmụmụ ya dịka onye na-ese ihe. O guzobere ma nọgide na-enwe njikọ siri ike maka obodo ahụ n'oge ndụ ya, ọ bụkwa ebe a ka ọ chọrọ ka ụlọ ngosi ihe ọ dị. Site na ọrụ 4,251 nke onye na-ese ihe gosipụtara, ụlọ ihe ngosi nka nwere otu n'ime nchịkọta kachasị elu nke ọrụ.
A na-edebe ihe ngosi nka n'ime ụlọ eze ise dị nso na La Ribera na Barcelona ma dị na Montcada Street na Barcelona. Isi ihe nchịkọta ahụ gụnyere abụọ n'ime ọrụ mbụ ndị mbụ ya, The First Communion (1896), na Science na Charity (1897). Ụlọ ngosi ihe ngosi a bụ otu n'ime ihe nkiri kachasị mmasị na Barcelona, ​​ma enwere oge ị nwere ike ịga leta n'efu. Ụbọchị ụtụtụ Thursday site na 6: 00 ka 9: 30 na Sunday mbụ nke ọnwa ọ bụla na-abanye ịhụ ọrụ a ma ama nke Picasso.
Obodo a ma ama a ma ama na Barcelona bụ onye na-eme njem nleta na windo n'ime omenala Catalan, na ebe obibi omenala, ihe nkiri na ebe obibi na-akpali akpali. N'elu osisi ụgbọelu, akụkụ nke etiti dị na La Rambla bụ boulevard nke na-agafe agafe, na-ezukọ kwa ụbọchị ruo mgbe awa na-ezigara ọha mmadụ. Mpaghara juputara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya, ụlọ ahịa, na ọbụna ndị na-egwu n'okporo ámá (egwu, mimes, ihe oyiyi, wdg). Ọ bụ ọdịbendị nke ntụrụndụ na ntụrụndụ, ọ nweghịkwa ohere ịga ije na gbasapụ ma nwee ahụmahụ ahụ.
Mercat de la Boqueria bụ ụlọ La Rambla kachasị mma maka ụlọ ahịa nri. Ebe ahịa kachasị na Barcelona bụ otu n'ime ụda kasị mma, isi ísì, na ụcha ihe nkiri na Europe. Ọ na-agwụsị na njirimara niile dị iche iche dị iche iche nke mkpụrụ osisi na ihe oriri, ọ dịkwa ka ndị na-akatọ oké osimiri, nsị, cheese, nri na sweets. Dị ka akụkọ ụfọdụ si kwuo, ahịa dị na ebe a ebe 1217 nọ, ebe ọ bụ taa na ọ bụ njem nleta njem na aka ya, ọ bụ mgbe nile ebe ndị mmadụ na-abịa ịzụ ahịa. Ọtụtụ n'ime ndị isi ụlọ ahịa dị na Barcelona na-azụta ihe ha na-emepụta ebe a, bụ nke na-achọ maka àgwà nke onyinye ahịa ahụ. Ọ bụ ebe na-adọrọ mmasị ị ga-enweta, na ịzụ ahịa ụlọ ahịa agaghị efu ihe.
Ọtụtụ ndị ọbịa na-abịa Barcelona iji hụ Sagrada Familia, bụ nke kwesịrị nleta nke ọma, ma ị ga-anọrịrị oge ịgagharị katidral Barcelona ọzọ. N'ịbụ nke e wuru na 13th Century, Catedral de la Barcelona bụ otu n'ime ihe nlereanya kachasị mma na Europe nke usoro ejiji nke Gothic ma ọ bụ n'efu ịbanye! Ewubere Katidral Gothic dị ebube nke Barcelona malitere na 1 May 1298, na saịtị nke ụlọ nsọ Romanesque.
A rụrụ ọrụ ahụ n'ọnọdụ atọ na 150 afọ. Katidral mara mma na-enweta nde mmadụ atọ kwa afọ. Ihe ebube nke Gothic art, nke mara mma nke Gothic na Baroque, choir ya dị egwu, baptistery na ili nke Saint Eulalia pụtara ìhè nye ndị niile na-ekiri ya.
Soro Njem Njegharị Na-agagharị
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị nta nke na-enye njem nleta na-agaghị agagharị na Barcelona, ​​n'ihi ya ọ bụ ụzọ dị ukwuu (na ọnụ ala) iji mara obodo ahụ ma chọpụta ụfọdụ n'ime nlegharị anya. Ọtụtụ n'ime nlegharị anya na ihe omume na Barcelona dịkwa maka ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ dị oke ọnụ, kwa.
Na-aga ije na Passeig de Gracia
Njem a na-aga n'ebe dị nso na Gracia nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ ndị a kasị mara amara na ụzọ mgbago na Barcelona, ​​n'ihi ezi ihe kpatara ya. Na-aga n'okporo ụzọ ọtụtụ n'ime ihe nlereanya kachasị mma nke obodo Gaudi - Casa Batllo na Casa Mila - na ọtụtụ n'ime Spanish na mba ụwa. O nweere onwe ya ịga ije na nlegharị anya na-eme ka ọ bụrụ njem na-akwụ ụgwọ.
Gaa Arc de Trimof
Ihe ọzọ na-emepụta ihe na Barcelona bụ Arc de Triomf, ma nke a abughi ihe mgbaru ọsọ mmeri gị. N'ịbụ ndị sitere n'ọnụ ụzọ ámá mmeri ndị ọzọ na Europe, sitere na nnukwu brik a na-acha uhie uhie wuru dị ka ụzọ e si aga eleta 1888 Barcelona World Fair. Ọ bara uru ịkwụsị site na ịmasị nkọwa nke usoro ahụ ma ọ bụ n'efu.
Jikọọ na Free Exchange Asụsụ
Otu n'ime ụzọ ndị kasị atọ ụtọ ị ga-esi nweta ọdịbendị ọhụrụ bụ ịmụta obere asụsụ mgbe ị nọ ebe ahụ. Site na ijikọta mgbanwe asụsụ n'efu ị nwere ike ịkọrọ onye ị ga-ahụ otu ahụmahụ nke ị ga-echeta ruo mgbe ebighị ebi, ị ga-enyekwara onye ọzọ aka ịme nkà asụsụ ha.
Hụ na ndị Rom nọ na Cultural Center
Ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme nke Gothic Quarter agaghị ezu iji kpalie gị, jide n'aka na ị ga-etinye oge n'ime Elborn Cultural Center ebe ị ga-ahụ ụfọdụ nkwụghachi azụ n'oge na-adịbeghị anya na ntọala ntọala n'oge oge Rom nke obodo ahụ.
O doro anya na ọ bụ n'ime otu n'ime ụlọ ahịa ndị kachasị ọhụrụ na obodo ahụ, na ịhụ ihe àmà nke puku afọ abụọ nke dị n'okpuru gị nke ụlọ, ụlọ ahịa, na ọmarịcha ụzọ mgbapụ dị iche iche na-atụgharị uche, na, ọ ka mma, ọ bụ n'efu!
Ndi otu na obodo
Barcelona abụghị naanị akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị, ọ bụkwa ihe na-akpali akpali ma dị egwu. A na-ahụ egwu abalị na obodo a siri ike site na ụlọ mkpọrọ na klọb na etiti obodo na ndị ọzọ n'akụkụ osimiri ndị dị nso. Ntak ị gaghị anọ n'otu n'ime ọtụtụ ịtụnanya otu gọọmenti rụrụ na Barcelona ebe ị nwere ike izute ndị njem ibe gị, wee banye n'ime ụlọ mmanya ahụ n'abalị iji mee ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ.
Category: Europe, Ebe nkiri ebe nkiri, Ihe efu, Spain Tags: Barcelona, el amu, njem na-ejegharị na-agagharị, gaudi, Spen, aga ije
← Paella Omuma
Kedu Ka ụra si adị mma mgbe ị na-eme njem →